Microsoft ကအစွမ်းကုန်ဖောက်သည်-oriented ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ၏တစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု. ဒါဟာအမြဲယင်း၏အသုံးပြုသူများလွယ်ကူခြင်းနှင့်အဆင်ပြေစေရန်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်. ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေဖို့, စာသားမက်ဆေ့လုပ်ဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလုပ်ဆောင်သွားရန်, Microsoft ကကျယ်ပြန့်က၎င်း၏က Android user တွေအတွက် Skype ကိုအဖြစ်လူသိများသည်၎င်း၏ကြီးမားတဲ့အရာရှိတဦးက app ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်.
skype က download, android ဖုန်း
Skype ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
skype က Lite apk
android ဖုန်းတက်ဘလက်များအတွက် Skype
download, skype က apk
စစ်တမ်းအရ, ထက်ပိုပြီး 250 သန်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရေးများအတွက် tool အဖြစ် Skype ကိုအသုံးပြုနေသည်. နှင့်သုံးစွဲသူများ၏နံပါတ်မှုကြောင့်၎င်း၏ထိရောက်စွမ်းဆောင်ရည်မှတစ်ခုချင်းစီကိုဖြတ်သန်းတစ်ရက်နှင့်အတူတိုးပွားလာနေသည်. မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကဒီ app ကိုသင် Skype ကိုသုံးပြီးအသုံးပြုသူများကိုမဆိုအတူဆကျသှယျဖွ. သင်ရုံ Skype ကို၏ interaction ကလောကီသားတို့သည်မဝင်ကောင်းတစ်ဦးကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်လူလာဒေတာကိုလိုအပ်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းများသင်ချင်မည်သူမဆိုစကားပြောပါစေပေမယ့် Skype ကို၏အကူအညီဖြင့်နိုင်ပါတယ်, သငျသညျအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှလည်းဗွီဒီယိုကို interaction က. ဒီအထူး app ကို Android အသုံးပြုသူတွေအတွက် revolutionize ထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကို Android အသုံးပြုသူများအတွက် Skype ကို၏ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ချင်လျှင်, ယင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အသုံးပြုမှု, ယင်း၏ထူးခြားတဲ့ features တွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းသို့ဖြစ်လျှင်ဤအထောကျအကူဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုစောင့်ရှောက်.
Android အတွက် Skype ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း
သငျသညျမစိုက်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအောက်ပါဖြင့်သင့် android device များပေါ်မှာဤမှတ်သားလောက် Skype ကို app ကိုရနိုင်
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းများအတွက်အပေါ်စတိုးဆိုင် play သွားပြီး s ကိုSkype ကိုများအတွက် earch သို့မဟုတ် ဒေါင်းလုပ် ပေးထားသောလင့်ခ်ကနေ ဒီမှာ.
အဆိုပါပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ button ကို Install ဒေါင်းလုဒ် Skype ကိုတပ်ဆင်မှုအတွက်.
သင်သည်သင်၏ app ကို install လုပ်ထားကြပါပြီပြီးတာနဲ့, ယခု click နှိပ်ပြီး get မှတ်ပုံတင် အဆိုပါ app ထဲတွင်
သင်သည်သင်၏ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည် အီးမေးအကောင့် နှင့် စကားဝှက်ကို.
သင်ကသုံးနိုငျ တည်ဆဲအကောင့် ဒါပေမယ့်သင်လုပ်ထို့နောက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင် အသစ်တစ်ခု.
သင့်ရဲ့ Choose Skype ကိုအမည်, သင့်ရဲ့အဖြစ်အသုံးပြုသော Skype ကို ID ကို တောင်းဆိုစတင်ရန်.
1 Skype ကိုဝင်မည် Interface:
1.1 ဆက်သွယ်ရန် Add & ခေါ်ရန် Make
1.2 Skype ကို၏အင်္ဂါရပ်များ:
1.3 high-အရည်အသွေးဗီဒီယို & အသံခေါ်ဆိုမှုများ:
1.4 Skype ကိုအပေါ်မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်း
2.0.1 Skype ကို၏ယှဉ်ပြိုင်မှု Edge:
3 အားလုံး device များအတွက် Skype ကို:
3.0.1 နှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Skype ကို
3.1 ကြိုးဖုန်းတွင် Call & Skype ကိုအတူမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ:
Skype ကိုဝင်မည် Interface:
ဆက်သွယ်ရန် Add & ခေါ်ရန် Make
Skype ကိုအပေါ်အဆက်အသွယ်ထည့်သွင်းဘို့, သငျသညျပြီးသား Skype ကိုအသုံးပြုနေသည်နှင့်သင့် e-mail, အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်အသုံးပြုသူများကိုပြသတဲ့ panel ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်. အခြားသောနည်းလမ်းသငျသညျသတင်းစကားသို့မဟုတ် Skype ကိုသုံးပြီးသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတောင်းဆိုစတင်ရန်မိမိတို့၏ Skype ကို ID ကိုပေါင်းထည့်နိုင်သူက e-mail ကိုမည်သူမဆိုလုပ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျ Skype ကို၏အဓိက menu ပေါ်တွင်လူတွေ Add ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်အဆက်အသွယ် add နိုင်ပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းရိုးရှင်းစွာယင်း၏ Skype ကိုအသုံးပြုသူအမည်ရေးသားခြင်း, ပြီးတော့အဆက်အသွယ် add အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လိုအပ်သောအသုံးပြုသူများကို add နိုင်ပါတယ်. ဒီအပြင်, သငျသညျအစအကြိုက်ဆုံးရဲ့ features တွေရန်သင့်တဲ့ Add သို့သူတို့ကိုငါဖြည့်စွက်အားဖြင့်သင့်တဲ့လူသုံးအများဆုံးအဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုစေနိုင်သည်. သငျသညျသင့်ရဲ့ privacy နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များများအတွက်အဆက်အသွယ်လည်းပိတ်ဆို့သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်.
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က Skype ကိုကမ္ဘာတဝှမ်းလူတိုင်းမင်္ဂလာပါလို့ပြောဤသို့ဖော်ပြသည်သောထူးခြားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည််ထမ်းဆောင်နေသည်.
Skype ကိုကျေနပ်မှုဖောက်သည်များ၏ကြီးမားသောစာရင်းရှိပါတယ်. နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ, လူသန်းပေါင်းများစွာအခြားလူများ chat သို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ် Skype ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်. Skype ကိုအပါအဝင်ထူးခြားသော features တွေကမ်းလှမ်း.
high-အရည်အသွေးဗီဒီယို & အသံခေါ်ဆိုမှုများ:
Skype ကိုပွီးပညာရှိရှိ၎င်း၏ဖောက်သည်ဖို့အစွမ်းကုန်အရည်အသွေးမြင့်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရလဒ်များကိုပေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. သငျသညျလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်.
အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, Skype ကိုနှစ်ဦးစလုံးတစျခုတစျခုမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုပေးသည်. သင်ကဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်မဆိုကြားဖြတ်ရှောင်ရှားရန်ကောင်းတစ်ဦးကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် အသုံးပြု. ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်ရမယ်.
ဤသည် Skype ကိုကကမ်းလှမ်းအလွန်အသုံးဝင်သော feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှု၏အကူအညီနှင့်အတူ, သငျသညျအဆင်ပြေသင့်ရဲ့တင်ပြချက်များကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်, ရုပ်ပုံများ, ဖုန်းခေါ်နေစဉ်အတွင်းစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ဘာမှမ.
ဒါကကော်ပိုရေးရှင်းကမ္ဘာကြီးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်. ဝန်ထမ်းများမိမိတို့၏အရေးကြီးသောဖိုင်များကိုအသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများမျှဝေနိုင်ပါသည်, ပြပွဲတင်ဆက်, စီမံကိန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို, အကငျြ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, လည်း client ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့ဖုန်းခေါ်စဉ်အတွင်းပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏ချက်တင်သို့မဟုတ်မည်သည့်လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖုံးကွယ်ချင်လျှင်, ပြီးနောက်သင် Skype ကိုတဆင့်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်. ဒီ app ကိုအဆုံး encryption ကိုလုပ်ငန်းစဉ်အဆုံးနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကစကားလက်ဆုံရှိသည်ဖို့ဖွ.
Skype ကိုလည်းသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတင်ရန်သင့်အားခွင့်ပြု. သင်သည်မည်သည့်အဖိုးတန်သတင်းစကားသို့မဟုတ်ယခုအချိန်တွင်မှတ်တမ်းတင်ချင်တဲ့အခါဒီအသုံးဝင်သည်. ဒါဟာအစသင်သည်သင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစဉ်အတွင်းအတွက်လွဲချော်သောအချက်များကိုချသင်ယူခြင်းနှင့်သတိပြုအတွက်အထောက်အကူ.
ဒီ feature ကိုလည်းကော်ပိုရေးရှင်းကမ္ဘာကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်, သငျသညျတဖနျသင့်ရဲ့နည်းပြဆရာသို့မဟုတ်သူဌေးကလမ်းညွှန်ချက်များကိုနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏မှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူလုပျနိုငျ.
Skype ကို၏ယှဉ်ပြိုင်မှု Edge:
Skype ကိုထက်ပိုပြီးအဘို့အ၎င်း၏ဖောက်သည််ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည် 10 နှစ်ပေါင်း. ပိုပြီး features တွေမကျြနှာကိုအချိန်နှင့်တူသောအခြားပြိုင်ဘက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောဤဗီဒီယိုအားတယ်လီဖုန်း app ကိုဒီယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးကွက်အတွက်ဧရာမထုတ်လုပ်ထားပြီးသူသည် Microsoft, Google ကနှစ်လုံးကို, စသည်တို့ကို. ပို့ဆောင်ကြသည်မဟုတ်. ဒီ app ကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တဲ့လူသုံးအများဆုံး App များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါထင်ရှားတဲ့ယှဉ်ပြိုင်အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်
အားလုံး device များအတွက် Skype ကို:
အများအားဖြင့်, Skype ကိုအန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းဖုန်းများအပါအဝင်တစ်ဦးဟာ android user အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, အန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်, နှင့်အခြား Android App များ. ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းကို Skype ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာကို Microsoft Windows အပါအဝင်အားလုံးအခြားထုတ်ကုန်များအပေါ်လည်းသုံးနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်, Linux ကို, Macintosh, ဘလက်ဗယ်ရီသီး, လူအပေါင်းတို့က Apple tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများ. သင်သည်မည်သည့်စက်ကိုရှိပါကသင်ရုံ Skype ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်ရှိသည်များနှင့်အများဆုံးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဗီဒီယိုတယ်လီဖုန်း apps များထဲကတစ်ခုခံစားနိုငျ.
နှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Skype ကို
ဒီအဆုံးစွန် Skype ကို app ကိုနောက်ထပ်ယှဉ်ပြိုင်ဒြပ်စင်သင်အွန်လိုင်းနေသောလူမျိုးခေါ်နိုင်ပါတယ်မသာပေမယ့်လည်းအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့နှငျ့အတူချိတ်ဆက်ဖို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. Skype ကိုမိုဘိုင်းနံပါတ်များနှင့်ကြိုးဖုန်းနံပါတ်များပေါ်တွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုပါရန်၎င်း၏အသုံးပြုသူများဒီပရီမီယံကမ်းလှမ်းမှုအဆိုပြုနေသည်.
ပုံမှန်အွန်လိုင်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်, သင်သည်တစုံတခုကိုပေးဆောင်ရန်မလိုပါ. သင်လိုအပ်အားလုံးတစ်ဖုန်းခေါ်ရန်သင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမယ့်ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်ကြိုးဖုန်းနံပါတ်များကိုတောင်းဆိုဘို့, Skype ကိုယင်း၏အသုံးပြုသူများအဖို့အလွန်ချွေ subscription ကိုပညတ်. ယင်း၏အသုံးပြုသူများ Skype ကို၏အခြားထင်ရှားသောအကျိုးခံစားခွင့်များမှာ
သင်သည်သင်၏မိသားစုမှဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများက. Skype ကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအတွက်အလွန်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်း.
Android အသုံးပြုသူများအပြင်, ဤအင်္ဂါရပ် desktop ပေါ်မှာအပါအဝင်တိုင်းကိရိယာသက်ဆိုင်သောများမှာ, iPhone ကို, Xbox, OSX နှင့်အများအပြားကပို
Skype ကို၎င်း၏ဖောက်သည်မြောက်မြားစွာနည်းလမ်းများဗီဇာအပါအဝင်စာရင်းပေးသွင်းမှုများအတွက်ဆပ်ဖို့ခွင့်ပြု, မာစတာကဒ်, JCB, PayPal က, လက်လီ, In-App ကိုဝယ်ယူခြင်းက Apple, အမေရိကန်အမြန်, Western Union နှင့်အများအပြားကပို
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်လွယ်ကူသည်. သင်ရုံစာရင်းသွင်းမှုအတွက်ပေးချေရန်ရှိသည်, ထို့နောက် Skype ကို app ကို download လုပ်ပါနှင့်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုကတယ်လီဖုန်းဆော့ဗ်ဝဲနဲ့တောင်းဆိုစတင်ရန်.
ကြိုးဖုန်းတွင် Call & Skype ကိုအတူမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ:
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကို အသုံးပြု. Skype ကိုအပေါ် Skype ကို-to-ကြိုးဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် Skype ကိုအကြွေး.
Click on the Skype credit link သင့်အကောင့်မှ Skype ကိုအကြွေးကိုထည့်သွင်းဖို့.
သငျသညျ Skype ကိုအကြွေးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးနဲ့သင်တစ်ဦး Skype ကို-to-ကြိုးဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, Skype will send youapop-up to top-up your account.
သင်တစ်ဦးသည်လစဉ် Skype ကိုကြေးပေးသွင်းရနိုင်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်သင် top-up, လို့ရပါတယ် One-ချွတ်ငွေပေးချေမှုကို အသုံးပြု..
လစဉ်ကြေးပေးသွင်းတက် Set, Skype ကိုသင့်ရဲ့နေ့စဉ်နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်ဆိုပါက. You will needadebit card for the subscription process.
Choose the amount of Skype credit you would like to add and '' Continue '' ကို click.
သင့်ရဲ့အကြွေးဝယ်ယူခြင်းနှင့်သင် Skype ကိုသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ.
အခုဆိုရင်သင်ကြိုးဖုန်းနံပါတ်များသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများခေါ်ဆိုစတင်နိုင်ပါသည်အချို့ Skype ကိုအကြွေးဝယ်ခဲ့ကြ.
စတင်ရန်, click on the phone icon ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း.
သငျသညျသကျဆိုငျရာနိုငျငံမြား၏ code ကိုထည့်သွင်းနှင့်အတူစကားပြောလိုအရေအတွက်ကို Dial နှင့် Call button ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ.
'' Add number ကို '' အပေါ်တစ်ဦးကြိုးဖုန်းကိုအရေအတွက်အားကလစ်နှိပ်ပါထည့်ရန် then enter the landline number you wish to add to your list.
သငျသညျအောင်မြင်စွာ Skype ကို app ကို install လုပ်ထားပြီမျှော်လင့်. သင်သည်မည်သည့်ဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်နေရနေတယ်ဆိုရင်, မှတ်ချက် box ထဲမှာသင့်ရဲ့ပြဿနာ drop. သင့်ရဲ့မေးမြန်းချက်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်. သည်းခံခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအပေါငျးတို့သခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ, you will surely be able to use Skype very easily.